नालाको दरबारबारे जानकारी::RATONEWS
नालाको दरबारबारे जानकारी
नालाको दरबार कस्तो छ ? कहाँ छ ? यसको फोटो भए हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेबारे सबै नालामी दाजुभाइहरुमा खुल्दुली भइरहेको होला । यसबारे हामीले अध्ययन गरी रहेका छौं ।
श्री उग्रचण्डी भगवती मन्दिरबाट दक्षिणतर्फ नालाको दरबार क्षेत्र १ अर्थात “क्वाठ” रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त स्थान हालको चण्डेश्वरी उच्च मा.वि. रहेको स्थान पर्दछ । चण्डेश्वरी उच्च मा.वि. नजिकै रहेको बारीको नाम हालसम्म पनि जनजिब्रोमा “क्वा किबा” रहेकोले पनि उक्त स्थान दरबार क्षेत्र हो भन्ने बलियो प्रमाण हो भन्न सकिन्छ । दरबारको पश्चिमतर्फ ठूलो सत्तल (वाहा) रहेको छ । त्यसको दक्षिणतर्फ १७ रोपनी खेत दरबार सञ्चालन गर्न विर्ताको रुपमा रहेको दरबारमा बगैंचा समेत रहेको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । दरबार कलात्मक ठूलो सात चोक भएको बनाइएको थियो र दरबारमा करीब करीब बीचमा ठूलो इनार पनि रहेको थियो । दरबार नजिकै चारैतर्फ माथि पर्खालमा नागले घेरिरहेको कलात्मक ढुङ्गेधारा रहेको थियो ।
दरबार सञ्चालन गर्न दरबारदेखि दक्षिण बगैंचा र बगैंचाको साथ संगै दक्षिणतर्फ भादगाउँको राजा भूपतेन्द्र मल्लले दश रोपनी खेत विर्ता दिएको उल्लेख गरिएको छ । दरबार नजिकै नालाको प्रवेश द्वार लायकू ध्वाका रहेको थियो जुन अहिले अवशेषको रुपमा हालको चण्डेश्वरी उच्च माविको कम्पाउण्ड पर्खालले थिचेको छ । सो ध्वाका (द्वार) लाई राजकुल ध्वाका भनिन्थ्यो । यिनै ध्वाकाबाट नालामा विवाह अथवा शुभ कार्य गर्दा भित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने गरिन्छ । यो परम्परा हालसम्म पनि कायमै रहेको देखिन्छ । ध्वाकाहरु मध्ये सर्वश्रेष्ठ राजकुल ध्वाका अर्थात लायकू ध्वाका हो । कुनै पनि शहर वा देशको शोभा भनेकै त्यतिखेर लायकू ध्वाका हो । चाहे पाटनको लायकू ध्वाका होस्, चाहे भक्तपुरको लायकू ध्वाका होस् । ती ध्वाकामा नेवारी पूजाआजाको प्रतीक स्वरुपम विभिन्न चित्रात्मक चित्र वा मूर्ति कुँदिएको हुन्छ ।
राजा बसेर शासन चलाउने दरबार नै लायकू हो । लायकू भनेको राजकुल अथवा लालकुल(लालकुलबाट लायकू शव्दको उत्पत्ति भएको) हो । लायकू शव्द मल्ल शासनको मध्यकालदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि ठूलो ढुङ्गाको पर्खालले सातवटा प्रवेशद्वार, अष्टमातृका गणहरुले घेरिएको राज्य खडा गरेका थिए । राजा बस्ने ती राजगृहहरु पनि लायकू नै थिए । ती दरबारमा देश नायक वा क्वाथ नायक बस्ने गरेको हुन पर्दथ्यो । त्यही दरबारबाट दशैं, नवदुर्गा जस्ता पर्वमा विभिन्न विधिको पूजा हुने गर्दथ्यो तथापि हालसम्म पनि केही चलनमा रहेको पाइन्छ, खासगरी मल्लकालीन दरबारहरुका क्षेत्रभित्र नाटक मञ्चन गर्न डबली, पानीका लागि पोखरी, इनार र ढुङ्गेधारा, धार्मिक पूजाआजाका लागि लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कुमार, भगवती, तलेजु, नारायण, शिवपार्वती, कुमारी जस्ता देवी देवताहरु स्थापना गरिएको हुन्थ्यो । मुख्य दरबार बाहिर कलात्मक पाटी पौवा रहनुका साथै दरबारको मध्य भागतिर प्रमुख राजभवन, गृह्योद्यान (दरबारभित्रको बगैंचा), व्यायामभूमि, स्नानगृह, भान्साघर आहार मण्डप रहेको पाइन्छ । यी सबै चिजहरु नाला दरबारमा पनि अवश्य रहेको हुनु पर्दछ ।